ပြင်သစ် - အများပိုင်သတင်း။ အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B Marketplace သတင်း
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 9, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 9, 2021 ဘင်နီဒစ် Kasigara	မှတ်ချက် Leave
UK - လက်လီရောင်းချသူများအမေဇုံထက်အခွန်ပိုပေးကြသည်
အမေဇုံ၏ဗြိတိန်စီးပွားရေးအခွန်နှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ မကြာသေးမီကအငြင်းပွားဖွယ်ရာမှာကော်ပိုရိတ်လောကတွင်အတော်လေးကြီးမားခဲ့သည်။ အမေဇုံသည်အအောင်မြင်ဆုံးနှင့်လူကြိုက်အများဆုံးအွန်လိုင်းလက်လီရောင်းဝယ်ရေးဆိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အမေဇုံကိုကမ္ဘာတဝှမ်းရှိကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများရှိဌာနခွဲများစွာရှိသည်။
WHO Tadros - ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းသည်ကူးစက်မှုကိုဖြစ်စေသည်
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အကြီးအကဲဥက္ကဌ Tadros Adhanom ကမ္ဘာကြီးသည်ရောဂါ၏အန္တရာယ်မှလုံးဝလွတ်မြောက်နိုင်သည်ဟုယုံကြည်သည် လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏အရေးတကြီးကိစ္စများပိုမိုအထိခိုက်မခံဖြစ်လာမှသာ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်လူသားတွေဟာကူးစက်ရောဂါတွေထပ်မံကြုံတွေ့ရ ဦး မှာပါ။
ပြင်သစ် - ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ COVID 19 Strain ၏ဖြစ်ရပ်ကိုတွေ့ရှိသည်
အဆိုပါ ပြင်သစ်ကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးဌာန သောကြာနေ့ကကြေငြာခဲ့သည် အဆိုပါ coronavirus သစ်ကို strain ၏ပထမ ဦး ဆုံးအမှု ကြောင်းမကြာသေးမီကယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ထင်ရှား။ , ထဲမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် တိုင်းပြည်။ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်နေထိုင်သောပြင်သစ်လူမျိုးကူးစက်ခံရသူမှာ အချိုးမညီနှင့်အိမ်မှာအထီးကျန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.
Brexit - ကူးစက်ရောဂါအတွင်းဗြိတိသျှအမှားတစ်ခုလား။
ဥရောပကော်မရှင်ကဇန်နဝါရီ ၁ ရက်နောက်ပိုင်းတွင်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းကိုထည့်သွင်းသွားမည်ဟုကြေငြာခဲ့သည် အီးယူ၏တတိယနိုင်ငံများစာရင်း။ Coronavirus ကူးစက်မှုကြောင့်အခြားနိုင်ငံများမှအီးယူအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသို့ခရီးသွားလာခွင့်ကိုဤစာရင်းတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်အပြီးတွင်ယူကေသည်ဥရောပသမဂ္ဂ၏အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တော့မည်မဟုတ်။
ဒီဇင်ဘာလတွင် 23, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 23, 2020 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
ဗြိတိသျှစီးပွားရေးသည်စိန်ခေါ်မှုများစွာနှင့်ကြုံတွေ့နေရသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ဗြိတိသျှစီးပွားရေးသည်စီးပွားရေးကျဆင်းလာပြီးစိတ်ကျဝေဒနာကိုပင်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံသားအများစုသည်ခရစ္စမတ်ကိုသီးခြားစီသီးသန့်ထားရှိကြလိမ့်မည်။
Coronavirus - ဥရောပခရီးသွားပိတ်ပင်မှုသည်ဗြိတိသျှကုန်တင်ယာဉ်များကိုစီးနင်းသည်
ဥရောပနိုင်ငံများနှင့်ယူကေနိုင်ငံများအကြားခရီးသွားလာခွင့်ပိတ်ပင်ထားမှုကြောင့်ထောင်နှင့်ချီသောလူများထွက်ပြေးခဲ့ရသည် ကုန်တင်ကားကြီးများပိတ်မိနေသည် အင်္ဂလန်၏တောင်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းရှိဒိုဗာဆိပ်ကမ်းတွင်အင်္ဂါနေ့ကဖြစ်သည်။ တနင်္ဂနွေနေ့ကပြင်သစ်နိုင်ငံသည်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်ရန်ပြောင်းရွှေ့လာခြင်းကြောင့်ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ပြင်သစ်သည်ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးစဉ်အားလုံးကို ၄၈ နာရီရပ်ဆိုင်းထားသည်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 21, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 21, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
Covid-19 အတွက်ဗိုင်းရပ်စ်အသစ်ကြောင့်အင်္ဂလန်တွင်ကူးစက်တတ်သော ၇၀% ပိုမိုကူးစက်တတ်သောရောဂါကြောင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံသည်တနင်္ဂနွေနေ့ကဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ယူကေနှင့်ခရီးသွားခြင်းကိုဆိုင်းငံ့ထားပါ.
ယူကေနှင့်ပြင်သစ် - ပြင်သစ်မြို့တော်ဝန်ကဖalklandsစစ်ပွဲကိုခြိမ်းခြောက်”
ဒီဇင်ဘာလတွင် 20, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 19, 2020 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
Boulogne-sur-Mer မြို့မှပြင်သစ်မြို့တော်ဝန် Frederic Couvillier ကယူကေအားဥရောပသမဂ္ဂနှင့်ငါးဖမ်းခြင်းဆိုင်ရာအငြင်းပွားမှုနှင့် ပတ်သက်၍“ ဖော့ကလန်ကျွန်းစစ်” နှင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံအားခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်မြို့တော်ဝန်က Brexit နောက်ဆုံးနေ့ကိုရောက်ရှိတော့မည်ဖြစ်သောကြောင့်လက်နက်ကိုင်ပconflictိပက္ခ၏ခြိမ်းခြောက်မှုကိုသတိပေးခဲ့သည်။
ဂျာမနီသည်အမြဲတမ်း UNSC ထိုင်ခုံအတွက်လေလံဆွဲနေသလား။
ဒီဇင်ဘာလတွင် 19, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 19, 2020 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
ရုရှားနှင့်တရုတ်တို့ကဂျာမနီသည်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၌အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ထို့အပြင်ရုရှားသံတမန်တစ် ဦး ကမူယခုလကုန်သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်တွင်ဂျာမနီသည်ဂျာမနီကိုလက်လွတ်မသွားကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သောအရှုပ်တော်ပုံနှင့်ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးပြောကြားခဲ့သည်။